Riviera Maya သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ ခရီးသွားသတင်း
Riviera Maya သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, မက္ကစီကို
မက္ကဆီကိုရဲ့ ခရီးသွားအများဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Riviera Maya ဖြစ်ပါတယ်။ နေ၊ ပင်လယ်နဲ့ ကမ်းခြေတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒါက အမေရိကမှာ အလိုအပ်ဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ Actualidad Viajes မှာ မင်းကို အချက်အလက်တွေ ပေးမယ်။ Riviera Maya သို့ခရီးသွားရန်အကြံပြုချက်များ။
ကပ်ရောဂါကြောင့် ဒီဒေသဟာ အများကြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေမယ့် ခရီးသွားတွေ တဖြည်းဖြည်း ပြန်စလာတာမို့ နောက်ခရီးစဉ်အတွက် မှတ်သားထားလိုက်ပါ။
1 Riviera မာယာ
2 Riviera Maya သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မက္ကဆီကိုပြည်နယ် Quintana Roo ရှိ ကာရေဘီယံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အရှေ့ဘက်တွင် စုစုပေါင်း ကီလိုမီတာ ၂၁၀ ခန့်ရှိသည်။ Yucata ကျွန်းဆွယ်n. ဤနေရာတွင် အခန်းပေါင်း 405 ခန့်ဖြင့် အမျိုးအစားကွဲပြားသော ဟိုတယ် 43.500 လုံးရှိသည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ အများစုသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော All-Inclusive System ကို ကမ်းလှမ်းပါသည်။
ဧရိယာတစ်ခုဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသည်။ အပူပိုင်းတစ်ပိုင်းသစ်တော အခြောက်၊ ကမ်းခြေများသည် သန္တာ သဲများဖြစ်သည်။ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ပူနွေးသောရေများသည် ကာရေဘီယံ၏ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်းမြေသည် ထုံးကျောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဂူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မြေအောက် သို့မဟုတ် ဂူများ သည် ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Riviera Maya ကို စိတ်ဝင်စားသော အဓိကအချက်များ Puerto Morelos၊ Cancun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ 16 ကီလိုမီတာခန့်နှင့် 32 မှ Cancun အတူတူပါပဲ။ ဆိတ်ငြိမ်သောလေထုဖြင့် ငါးဖမ်းမြစ်ဖျားခံသော ကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သည်။
လည်းဖြစ်ပါတယ် Playa del Carmenဟိုတယ်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသော Riviera ပေါ်တွင် အရေးကြီးဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးမြို့၊ လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် ကမ်းခြေများ လေးကီလိုမီတာရှိပြီး ၎င်းသည် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ Cozumel. နောက်ထပ် ဦးတည်ချက်တစ်ခုကတော့ Puerto Aventuras
Puerto Aventuras သည် ကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးလှေဆိပ်၊ ဂေါက်ကွင်းနှင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကမ်းခြေများပါရှိသော ရေကြောင်းလေဖြင့် ခရီးသွားများနှင့် လူနေရပ်ကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့နောက်ကို လိုက်သွားပါ။ akumalဟိုတယ်နည်းပါးသော်လည်း snorkeling၊ cenotes နှင့် ကမ်းရိုးတန်းကျောက်တန်းများ အတွက် လှပသော Yalku ရေကန်နှင့်အတူ၊ ဤနေရာတွင် အခန်းသုံးခန်းပါသည့် လှပသောလှိုဏ်ဂူတစ်ခုဖြစ်သည့် Aktun Chen သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။
Tulum ၎င်းသည် ဂန္ထဝင်အရှိဆုံး ပို့စကတ်ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်း ရှေးဟောင်းသုတေသနဇုန်က ဓာတ်ပုံလှလှလေးတစ်ပုံပါ။ ရှေးခေတ် မာယာမြို့ မှာ တံတိုင်းကာရံထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိနေပြီ cobá အပျက်အစီးများကီလိုမီတာ 40 ခန့်အကွာတွင်ရှိပြီး cenotes အများအပြားလည်းရှိသည်။ Cobá အကြောင်းပြောလျှင် ၎င်းသည် ကီလိုမီတာ ၉၀ ဝေးသော မာယာရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ Chichen Itza
သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်တော့ ရှိတယ်။ Sian Ka'an Biosphere ဘေးမဲ့တောကာရေဘီယံကမ်းခြေတွင် 1987 ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆောင်ထားရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။ငါ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလပ်မှာ အမြဲတမ်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသလွန်းတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရွက်လွှင့်ခြင်းနဲ့ တခြားအားကစားတစ်ခုခုကို လေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လက်မှတ်တွေကို ယူလာသင့်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံ ဟုတ်ပါတယ်။
လက်ရှိငွေကြေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မက္ကဆီကန်ပီဆို သို့သော် ခရီးသွားနေရာအများစုတွင် ၎င်းတို့ကို အညီအမျှ လက်ခံထားသည်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် ယူရို။ အဓိက အကြွေးဝယ်ကတ်များ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် (Visa၊ Mastercard၊ American Express) များဖြစ်ပြီး ဆိုင်ငယ်များနှင့် လမ်းဘေးဆိုင်များတွင် မဟုတ်ဘဲ၊ အထူးသဖြင့် လေ့လာရေးခရီးထွက်သည့်အခါ လက်ထဲတွင် ပီဆိုအနည်းငယ်ရှိရန် အမြဲအဆင်ပြေပါသည်။
ATM စက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ Cancun နှင့် Riviera Maya တို့တွင်၊ သို့သော် ၎င်းတို့အား မယုံပါနှင့်၊ ဤအပျော်ခရီးဖြင့် ဟိုတယ်မှထွက်ခွာသည့်အခါတိုင်း သင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေကို ယူပါ။ ရေ၊ နေရောင်ကာခရင်မ်၊ သင်နှစ်သက်တဲ့ လက်ရာ ဒါမှမဟုတ် ရေဝယ်ချင်ရင် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အစွန်အဖျားတစ်ခုချန်ထားပါ။. ဤနေရာတွင် မက္ကဆီကိုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘားများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဘေလ်စုစုပေါင်း၏ 10 နှင့် 15% ကို ထားခဲ့ရန်ဖြစ်သော်လည်း အချို့သောဆိုဒ်များတွင် ၎င်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့် စစ်ဆေးရန် အဆင်ပြေပါသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကို အကြံပေးတာကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။
Riviera Maya ကို ဘယ်အချိန်မှာ သွားသင့်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပူပြီး စိုစွတ်နေပေမယ့် မေလကနေ အောက်တိုဘာလအတွင်း မိုးရွာပြီး ဇွန်လကနေ နိုဝင်ဘာလအထိ ဟာရီကိန်းရာသီဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့ရာသီသည် နိုဝင်ဘာလမှ ဧပြီလအတွင်းဖြစ်သည်။ ဇန်န၀ါရီနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလများတွင် သာယာသောအပူချိန် 25°C ခန့်ရှိသော်လည်း၊ မြောက်လေသည် ဒီဇင်ဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလတို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပြီး မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းနိုင်သည်။ အားလပ်ရက်များမှလွဲ၍ ဤရက်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် low season အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများရှိပြီး လူအနည်းငယ်သာရှိသည်။
သို့သော်ငြားလည်း, မိုးရာသီသည် မေလမှ အောက်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်သည်။ မိုးနှင့် အပူနှင့် စိုထိုင်းဆနှင့်အတူ။ မိုးရွာသွန်းမှု ပြင်းထန်နိုင်ပြီး ခဏကြာပြီးနောက် နေထွက်သည်။ High Season သည် ဇွန်လမှ သြဂုတ်လအတွင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဈေးတွေက ပိုဈေးကြီးပြီး လူတွေလည်း ပိုများလာတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် အဆိုးဆုံးမှာ ဟာရီကိန်းရာသီဖြစ်ပြီး ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ၊ အထူးသဖြင့် သြဂုတ်လနှင့် အောက်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများ ကျရောက်နေပြီး မိုးလေဝသစနစ်က အချိန်မီသိရှိနိုင်သော်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။
Riviera Maya နှင့် Cancun သို့ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် 15 သန်း လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဟုတ်တယ်၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်... ကံမကောင်းစွာပဲ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဟာ အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပေမယ့် မက္ကဆီကိုရဲ့ ဒီအစိတ်အပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မက္ကဆီကိုကနေ ဖျက်သိမ်းဖို့ အကြောင်းပြချက်မရှိသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ခရီးသွားနေရာများစာရင်း။ အခြားသတိထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်ပုံမှန်အတိုင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
လေးစားမှုနှင့်အတူ တင်ဆောင် ဧရိယာထဲမှာ အရာအားလုံး ရှိတယ်။ ဘတ်စ်ကားများနှင့် တက္ကစီများကို ကားအငှားနှင့် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုများ. သင်ရွေးချယ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် သင့်အစီအစဉ်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အပျော်ခရီးတစ်ခုသွားလျှင် ကားငှားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဧည့်လမ်းညွှန်၏အကူအညီနှင့် လက်မှတ်များပါရှိသော အသွားအပြန်ခရီးစဉ်များအတွက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ စျေးဝယ်ထွက်ရင် ဟိုတယ်မှာ Taxi တောင်းပြီး ကဲလိုက်ပါနော်။ အကယ်၍ သင်သည် လမ်းပေါ်၌ တစ်ခုရပ်တန့်သွားပါက၊ ၎င်းတွင် လိုင်စင်ရှိပြီး မီတာမရှိသောကြောင့် ခရီးစဉ်၏စျေးနှုန်းကို ပြင်ဆင်ပါ။
ပိုက်​​ရေ​သောက်​နိုင်​လား? ယေဘုယျအား အဘယ်သူမျှမ ဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်တောင် မင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူး။ ဗိုက်နာပြီး အားလပ်ရက်ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဖြုန်းချင်သူတစ်ယောက်လား။ ရေသန့်ဗူးကို အမြဲကြိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်မှာနေသင့်လဲ။ အများအပြားရှိပါတယ် အားလုံးပါဝင်နိုင်ဟိုတယ် သူတို့က အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပါ။ အထူးသဖြင့် Cancun ဧရိယာကိုဖြတ်သွားလျှင်။ ယခု၊ သင်သည် Riviera Maya နှင့် အထူးသဖြင့် Cozumel နှင့် Playa del Carmen သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုပါက လူကြီးများအတွက် Royal Hideaway Playacar ကဲ့သို့သော လှပသောဟိုတယ်များ သို့မဟုတ် Playa del Carmen ရှိ Xcaret သို့မဟုတ် Allegro Playacar တွင် Occidental ရှိပါမည်။ ဟိ Barceló အဖွဲ့ ၎င်းသည် မက္ကဆီကို၏ ဤအပိုင်းတွင် တည်းခိုစရာများစွာရှိသည်။
Riviera Maya ခရီးစဉ်မှာ ဘာတွေ လွဲမှားနေနိုင်မလဲ။
Akumal Ecological Center သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။
Cenote Dos Ojos ရှိ Snorkel
Xel- Há ဂူများ
Riviera Maya မှ နှစ်နာရီအကွာ Holbox ကျွန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ ၄၂ ကီလိုမီတာသာ ရှည်လျားသော်လည်း အပူပိုင်းဒေသရှိ ငှက်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
Playa del Carmen၊ Rio Secreto
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » Riviera Maya သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
Sierra de Madrid ရှိ လှပသောမြို့များ